रेनुको दाबी- चुनाव जितेपछि प्रचण्डले चितवनको कायापलट गर्नुभयो (भिडिओ) – Nepal Press
रेनुको दाबी- चुनाव जितेपछि प्रचण्डले चितवनको कायापलट गर्नुभयो (भिडिओ)
२०७८ पुष २५ गते १५:३२
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहेको दाबी गरेकी छन् । उनी प्रचण्डपुत्रीसमेत हुन् ।
चितवनबाट चुनाव जितेपछि अहिलेसम्ममा जिल्लाको विकास निर्माणमा प्रचण्डले कायापलट गरेको उनको जिकिर छ । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको भिडिओ कुराकानीमा उनले शान्तिप्रक्रियायता देश प्रचण्डकै वरिपरि रहेको र हरेक समस्याको समाधान अध्यक्ष दाहालबाट नै भएको बताइन् ।
महानगरको विकास र शीर्षस्थ नेतृत्वको कारण जिल्लाले छोटो समयावधिमै विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘प्रचण्ड यहाँको नभइ अन्यत्र जिल्लाको प्रतिनिधि हुँदा चितवनको अवस्था के थियो ? त्यो आकर्षण चितवनमा थिएन । अध्यक्ष कम्रेड चितवन जिल्लाबाट जब जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनु भयो । तब यो छोटो अवधिमा चितवनको चर्चा, परिचर्चा कस्तो छ ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा, आम सबै हिसावले । अहिले हरेक गतिविधि राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि चितवन केन्द्रित छन् ।’
फरक प्रसंगमा मेयर दाहालले चितवन मेडिकल, शैक्षिक, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक केन्द्र भएको बताइन् ।
प्रकाशित: २०७८ पुष २५ गते १५:३२